မိန်းကလေးတို့ရှောင်ရှားသင့်သော ယောက်ျား ၁၂ မျိုး - Tameelay
၁။မိန်းကလေးတကာနှင့် အလွယ်တကူ ခင်မင်မှုရရှိတတ်သော ယောက်ျား
၂။သာမန်ခင်မင်မှုကိုအကြောင်းပြပြီးမသက်ဆိုင်သောစကားများကို Message orphone ဆက်ပြော တတ်သော ယောက်ျား
၃။မိန်းကလေးများ၏ အလှအပပြင်ဆင်မှုအပေါ်အမြဲဝေဖန်လေ့ရှိသော ယောက်ျား
၇။မိန်းကလေးများအား မထိတထိစကားပြော၍ စတတ်နောက်တတ်သော ယောက်ျား
၁၁။မိန်းကလေးများ၏ ကိုယ်ခန္ဓာစည်းပုံကို အမြဲဦးစားပေး အကဲခတ်တတ်သော ယောက်ျား
အသိပညာအတက်ပညာတွေဘယ်လောက်ပင်သင်ပေးသင်ပေးယောက်ျားတွေရဲ့သကာလူးထားတဲ့စကားတွေရဲ့အောက်မှာဘဝပျက်ခဲ့ရတဲ့မိန်းကလေးတွေဘယ်လောက်များရှိနေမလဲ ဆိုတဲ့အတွေးကြောင့် ညီမလေးများအတွက်
၁။မိနျးကလေးတကာနှငျ့ အလှယျတကူ ခငျမငျမှုရရှိတတျသော ယောကျြား
၂။သာမနျခငျမငျမှုကိုအကွောငျးပွပွီးမသကျဆိုငျသောစကားမြားကို Message orphone ဆကျပွော တတျသော ယောကျြား
၃။မိနျးကလေးမြား၏ အလှအပပွငျဆငျမှုအပျေါအမွဲဝဖေနျလရှေိ့သော ယောကျြား
၇။မိနျးကလေးမြားအား မထိတထိစကားပွော၍ စတတျနောကျတတျသော ယောကျြား
၁၁။မိနျးကလေးမြား၏ ကိုယျခန်ဓာစညျးပုံကို အမွဲဦးစားပေး အကဲခတျတတျသော ယောကျြား
အသိပညာအတကျပညာတှဘေယျလောကျပငျသငျပေးသငျပေးယောကျြားတှရေဲ့သကာလူးထားတဲ့စကားတှရေဲ့အောကျမှာဘဝပကျြခဲ့ရတဲ့မိနျးကလေးတှဘေယျလောကျမြားရှိနမေလဲ ဆိုတဲ့အတှေးကွောငျ့ ညီမလေးမြားအတှကျ
ပို၍လှသော မနက်ဖြန် (အရမ်းကောင်းတဲ့စာ ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်နော်)
ငိုကြွေးနေတာလား? … မနာကျင်လိုက်ပါနဲ့ အနာဂတ်မှာ ကြင်နာခြင်းအပြုံးတွေ ဖူးဖွင့်နိုင်မှာပါ။ အသဲကွဲနေတာလား … ဘဝမပျက်လိုက်ပါနဲ့ အနာဂတ်မှာ အသဲစွဲချစ်ရတဲ့သူ တွေ့ဆုံနိုင်ဖို့ပါ။ လဲကျနေတာလား … စိတ်ဓာတ်တော့မကျလိုက်ပါနဲ့ အနာဂတ်မှာ အောင်မြင်ခြင်းပန်းတိုင်းက အပြုံးလှလှလေးနဲ့ စောင့်ကြိုနေမှာပါ။ သူငယ်ချင်းရေ … လောကကြီးမှာ အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံလာရင် စိတ်ဓာတ်တွေ ထွေးပြားဝေဝါးပြီးကျဆင်းနေခဲ့ရင် …
ကိုယ့်စိတ်ကို မနှိပ်စက်ပါနဲ့စိတ်မညစ်ရအောင် ဒီစာလေးဖတ်ပါနော်..
“ကိုယ့်စိတ်ကို မနှိပ်စက်ပါနဲ့စိတ်မညစ်ရအောင် ဒီစာလေးဖတ်ပါနော်…. ကိုယ့်ကို နှိပ်စက်နိုင်နေတဲ့ အတွေးတွေ မတွေးပါနဲ့။ ကိုယ့်စိတ်ကို ပူလောင်စေတဲ့ အတွေးတွေ မတွေးပါနဲ့။ ကိုယ့်အပေါ် မကောင်းတဲ့သူတွေအကြောင်း မတွေးပါနဲ့။ ကိုယ့်ကို မခေါ်ချင်တဲ့ သူတွေအကြောင်း မတွေးပါနဲ့။ ကိုယ့်ကို ဂရုမစိုက်သူတွေအကြောင်း မတွေးပါနဲ့။ ကိုယ့်စေတနာကို နားမလည်သူတွေအကြောင်း မတွေးပါနဲ့။ ကိုယ့်အပေါ် …
“လဲရင် ပြန်ထ၊ ဒါ.. ဘဝပဲ ” ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း အရှုံးတွေကြုံလာတဲ့အခါ ပြန် လည်ထူမတ်နိုင်စေမယ့် နည်းလမ်းကောင်း
လဲရင်ပြန်ထ_ဒါ_ဘဝပဲ ဘဝတိုင်းကတော့ အခက်အခဲတွေကိုယ်စီနဲ့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကြုံလာသမျှ အခက်အခဲတိုင်း ကိုသာ အရှုံးပေးနေမယ်ဆိုရင် အောင်မြင်မှုတွေကိုလည်း ဘယ်တော့မှ ဆုပ်ကိုင်နိုင်တော့မှာ မဟုတ် ပါဘူး။ ဒါကြောင့် “လဲရင် ပြန်ထ၊ ဒါ.. ဘဝပဲ ” ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း အရှုံးတွေကြုံလာတဲ့အခါ ပြန် လည်ထူမတ်နိုင်စေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးတချို့ကို ဂန္ထဝင်ရဲ့ …